अधुरा सपनाहरु.... - Jagaran Post
जागरणपोस्ट ८ फाल्गुन २०७७, शनिबार १४:५४
वि.सं २०४९ सालमा म जन्मिए । असोजको महिना थियो, सबै दशैको प्रतीक्षामा थिए, मेरो घरमा भने अझै एउटा खुसी थपियो । छोरा जन्मिए बाउको वंश अगाडी लैजान्छ भन्ने समाजमा छोरा जन्माउँदा मेरा बाउ पनि खुसीले गदगद थिए रे ।
नाती खेलाए स्वर्ग गईन्छ भन्ने त्यतिबेलाको जनभावना । सायद त्यसैले होला मेरी हजुरामा निकै खुसी थिईन् रे । प्रसव पीडा सहि मलाई जन्माएकी मेरी आमा आफ्नो त्यो पीडा भुली सन्तान प्राप्तिको खुसीमा रम्दै थिईन् होला सायद । छोरा जन्माए लक्षिनकी भन्ने जनभावना त्यतिबेला व्याप्त थियो । त्यसदिनदेखी मेरी आमापनि लक्षिनकी सावित भईन् त्यो समाजको लागि । हुन त नारीको कर्म न हो, बिहे गरी जन्मघर छाडी आऊ, अनि छोरा जन्माई वंश अगाडी बढाए लक्षिनकी नत्र अलक्षिनाई ।
दिन बित्दै गए, म पनि विद्यालय जाने उमेरको भए । गाउँको जागृती प्राथमिक विद्यालयमा भर्ना भए । यहि क्रममा मेरो विरेसँग भेट भयो । विरे अनि म गाउँको चौतारीमा भेट भई सँगै विद्यालय जान्थ्यौं । नाकमा सिगान, धुलोले रंगिएका पोशाक अनि चुढेर रसिले बाधेका फिते चप्पल सँगै हामी विद्यालय प्राङ्गणमा पुग्थ्यांै । दिन वित्थ्यो, घर फर्किन्थ्यौ । यो क्रम चली नै रह्यो ।
गाउँमा राजा विरुद्धमा शसक्त क्रान्ति चलिरहेको थियो । जय माओवाद भन्ने नारा घन्किरहन्थ्यो । लोकतन्त्र स्थापना गर्न हिडेका जनमुक्ति सेना र प्रहरीका कारण पुरै गाउँनै त्रसित थियो । एकदिन विर्खे साहू हाम्रो घरको आँगनिमा आई चिच्याउन लागे । विर्खे साहू, जो सँग मेरा बुवाले आर्थिक अभावका कारण ऋण लिगेका रहेछन् ।
विर्खे साहू : हर्के ! ए हर्के ! बाहिर निस्के ।
बुवा : ए ! विर्खे साहू पो आईबक्स्या रैछ । नमस्कार हजुर ! मैया ए मैया, कुर्सी लियर आइज त ।
आमाले कुर्सी लियर राखिदिईन् ।
बुवा : आसन ग्रहण गरिबक्सियो हजुर ।
विर्खे साहू कुर्सीमा बस्दै भन्छन् , तैले त मेरो पैसा पचाइदिस् नि ।
बुवा : होइन हजुर ! अहिले खेती पनि तेती भएन, आर्को वर्षसम्म कुरिदिनुस न मालिक ।
विर्खे साहू : केको आर्को वर्ष, अब त छोरो पनि हुर्किएछ । यसैलाई पठाइदे हाम्रो तिर, श्रम गर्दै गर्छ, पैसा कटौती गर्दै जान्छु ।
बुवा : अहिले त सानै छ मालिक । यसलाई पढाएर ठूलो मान्छे बनाउनी सपना छ । क्षमा गरिबक्सियोस् मालिक यसलाई पठाउन सक्दिन ।
विर्खे : उसोभए १ महिनाको समय दिन्छु , तिर्न सकिनस भने त नै आइज्क नि त्या ।
बुवा : जो आज्ञा मालिक ।
विर्खे साहू : उसोभए म लागे अहिले ।
बुवा : हस ! मालिक ।
दिन बित्दै थिए । गाउँमा विर्खे साहूको ज्यादती पनि चरममानै पुगिसकेको थियो । उता मेरो बुवा ऋण तिर्न नसकेर विर्खे साहूको गुलामी लागे । विर्खे साहूले बुवामाथी हातपात पनि गर्थ्यो रे । यो सुन्दा मनमा बदलाको भावना आउन थाल्यो । देशको व्यवस्थाप्रती घिन लाग्न थाल्यो । भनिन्छ नि बदलाको भावनाले अक्सर मान्छेले मार्ग बिराउछ, मैले पनि बिराएछु । व्यवस्था परिवर्तन र विर्खे साहूसँगको बदलाको भावनाको कारण म माओवाद तिर लागे । कलम समात्ने ती हातले त्यतिबेला झन्डा समायो, गोली समायो, बन्दुक समायो । त्यतिबेला नै मेरो बुवाको पढाई लेखाइ गराई मलाई ठूलो मान्छे बनाउने सपना अधुरो नि रह्यो । अझै यो भनौ मैले मेरै हातबाट मेरो बुवाको अनि मेरो सपनाको घाँटी निमोठे ।
युद्द्को तयारी हुन लाग्यो, म जस्ता धेरै थिए । फरक यत्ती थियो, म बदलाको लागि आएको, उनीहरु समाज समाज बदलाभको आशमा । विद्यालय जाने उमेरमा म युद्धमा जान लागे, झोला भिर्ने त्यो काधमा बन्दुक भिरिएको थियो, पानीको बोटल बोक्ने ती हातमा ग्रेनाइट र बम थिए । युद्ध कालमा जलेका ती विद्यालय भवनहरुसँगै म जस्ता कयौं विद्यार्थीहरुका सपनाहरु जल्दै थिए, भत्किएका ती सरकरी भवनहरु सँगै कयौं नगरिकका सपनाहरु पनि भत्किए, ढलेका ती लाससँगै धेरै आमाका सन्तानप्रतिका सपनाहरु ढले, धेरै चेलीका सिउँदोका सपनाहरु ढले र ढले ती बुवाका सन्तानप्रतिका सपनाहरु ।
पछि शान्ती सम्झौता भयो । हिजोका कुकुर बिराला आजका दाजुभाई बने । देशको ब्यवस्था त परिवर्तन भयो तर अवस्थामा परिवर्तन आएन । व्यवस्था र अवस्था बदल्न लड्ने ती सहिदका सपनाहरु अझै अधुरा छन् । हुन त राजनितीको शुक्रकिट नै खराब परेको देशमा, नागरिकका सपनाहरूको प्रत्येक रात “एबोर्सन” हुदो रहेछ । यहाँ त हरेक सपनाका घाटी रेटिन्छन् । यहाँ त सबै सपनाहरु अधुरो नै रहन्छन् ।
तुलसी निरौलाका तीन कृतीहरुको सार्वजनिकिकरण सौराहामा